အင်းစိန်ထောင်မှာ ဖမ်းစီးခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် လူမင်း၊ ပြေတီဦး ၊ ဦးဇင်ဝိုင်း တို့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောပြတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်…. – Cele Oscar
အင်းစိန်ထောင်မှာ ဖမ်းစီးခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် လူမင်း၊ ပြေတီဦး ၊ ဦးဇင်ဝိုင်း တို့ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောပြတဲ့ ရုပ်သံဖိုင်….
May 7, 2021 By L YC News
မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ အတျောပုံကွီးတှငျ ပါဝငျလှုပျရှားနသေူမြားကို စဈအစိုးရကောငျစီက ပုဒျမ၅၀၅ (က)ဖွငျ့ဖမျးစီးအရေးယူခွငျးမြားကို ဆကျတိုကျဆိုသလို လုပျဆောငျနတောပါ။အဲဒီအထဲမှာပွညျသူတှနေဲ့အတူရပျတညျပွီး တကျတကျကွှကွှပါတငျလှုပျရှားနတေဲ့ အနုပညာရှငျမြားစှာကိုလညျးတှရေပါတယျ။
လကျရှိပုဒျမ ၅၀၅(က)ဖွငျ့ ဖမျးစီးထိနျးသိမျးခံထားရသော အနုပညာရှငျမြားထဲမှ ကိုလူမငျး ၊ ကိုပွတေီဦး ၊ ဦးဇငျဝိုငျးတို့အခွအေနကေို အငျးစိနျထောငျမှ ပွနျလညျလှတျမွောကျလာသူတဈဦးက ပွနျလညျပွောပွပေးထာသော အသံဖိုငျဖွဈပါတယျ။ ပရိတျသတျကွီးလညျး ကိုလူမငျး ကိုပွတေီဦး ဦးဇငျဝိုငျးတို့ကိုလညျး
ပွနျလညျလှတျမွောကျ လာအောငျ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံးနျော။ ဖတျရှုပေးသူတဈ ဦးခငျြးစီကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ……..။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ အတော်ပုံကြီးတွင် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူများကို စစ်အစိုးရကောင်စီက ပုဒ်မ၅၀၅ (က)ဖြင့်ဖမ်းစီးအရေးယူခြင်းများကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို လုပ်ဆောင်နေတာပါ။အဲဒီအထဲမှာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်ပြီး တက်တက်ကြွကြွပါတင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အနုပညာရှင်များစွာကိုလည်းတွေရပါတယ်။
လက်ရှိပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့် ဖမ်းစီးထိန်းသိမ်းခံထားရသော အနုပညာရှင်များထဲမှ ကိုလူမင်း ၊ ကိုပြေတီဦး ၊ ဦးဇင်ဝိုင်းတို့အခြေအနေကို အင်းစိန်ထောင်မှ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတစ်ဦးက ပြန်လည်ပြောပြပေးထာသော အသံဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ကိုလူမင်း ကိုပြေတီဦး ဦးဇင်ဝိုင်းတို့ကိုလည်း
ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာအောင် ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်။ ဖတ်ရှုပေးသူတစ် ဦးချင်းစီကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်……..။